Nzira yekusarudza yakanaka yekucheka bonde nekunzwisisa mashandisiro uye hunhu hwekucheka bonde?
1. Chinangwa uye hunhu hwetambo yekucheka? Iyo yekucheka pad ndeimwe yematurusi ayo mapepa emhando vatambi vanofanirwa kushongedza. Mateki ekucheka ndechimwe chezvishandiso izvo vatambi vemuenzaniso vanofanirwa kushongedza: a. Iyo yekucheka bonde inodzivirira banga uye inowedzera hupenyu hwebasa reza; b. The cutti ...
Pane chiteshi kukwidziridzwa uye mhando yekuvaka ye Stationery indasitiri muChina
Hukama huripo pakati pemugadziri nemutengesi hunogara muhukama hwekutengeserana hwakareruka, uye mapato maviri aya haashande pamwe uye kudyidzana. Nekuda kweizvozvo, zviwanikwa zvemapato maviri aya hazvina kubatana uye chinangwa cheyakajairika mhando mumusika haigone ...